8 Horror Mafirimu paHulu kuenda kuSocial Distance uye Chill | iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 8 Horror Mafirimu paHulu kuenda kuSocial Distance uye Chill
8 Horror Mafirimu paHulu kuenda kuSocial Distance uye Chill
yakanyorwa na Timothy Rawles March 13, 2020
COVID-19 inogona kunge ichikuvadza nyika asi zvisinei nekutyisidzira, iri kutipawo chikonzero chekuve wakadzika midzi munzanga-kure kure mbatatisi. Mumashoko akawanda CDC inoda kuti isu "tigare kure nevanhu uye titonhore."
Izvo hazvisi kuita kujekesa mamiriro acho ezvinhu, kutaura zvazviri, isu sevanoda kutyisa vanoda mafirimu tiri kunyatso kuita chikamu chedu kubatsira kudzora kupararira kwehutachiona nekugara pamba, chimwe chinhu icho CDC yakaraira senzira yekudzivirira. Uye Hulu anogona kutibatsira kuita izvozvo.
Izvi zvinogona kuve zvakakosha kupfuura bepa remuchimbuzi.
Saka sevhavha dzinobhombwa kwese kwese, heano masarudzo angu emafirimu anotyisa parizvino ari kutenderera Hulu kunakidzwa apo isu tinopfuura nepachinhu ichi.
Heano maitiro ako nzanga kure uye kutonhora:
Iyi firimu inotyisa paunonyanya kufunga nezvayo. Kunyangwe mushure mekukweretwa kwezvikwereti, pane chiitiko chimwe chete muhofisi yemurapi inosanganisira yepubiki bvudzi iyo inofanirwa kukuchengeta iwe wakachengeterwa mukudzivirira kubereka kweupenyu hwako hwese.
Saka pamwe izvi hazvisi izvo zvakanakisa zvakateedzana, asi zvakanyatso kunaka zvakakwana. Misungo yakakura, iyo inouraya inopfuura uye iyo ngano inorarama. Izvo zvinofanirwa kukuchengetedza iwe kuguta kusvikira iyo Chris Rock-yakagadzirwa kupinda inowanikwa.
28 Days Gare gare
Kunyangwe hutachiona pano husinga shandure vanhu kuva zombies pa se, meseji yekupedzisira-apocalyptic ichiripo. Uye kune izvo, isu tinofanirwa kuzvitarisa kungo ponda coronavirus. Kungo tenda kuti mamiriro edu azvino ndiwo zvazviri.
Kune avo venyu vari kuda bhaisikopo raMike Flanagan kupenya, tora nguva shoma kubva pane yako yekumba-pamba purogiramu yekuona iyi, yake sophomore firimu.
Iyi yaimbove iri 3-D inova yakanaka nekuti zano rakanga rakapetana. Zvakadaro, zvinonakidza sekuchema uye isu tinogona kukoshesa kuwedzera kutsva kumhuri.
Iyi ndiyo yaive yakanakisa inotyisa bhaisikopo ya 2018. Chinja pfungwa dzangu.
Aya mashoma apfuura makore angave anga ari zera raMambo - Stephen King ari- asi ngatizvipei kune mumwe munyori anotyisa uyo akatonga iyo New York Bestseller runyorwa munguva yake. Dean Koontz's Odd Thomas ibasa rehunyanzvi, rakajeka uye rakareruka.
Achitaura nezvaMambo, heino imwe yeanoshamisira mafirimu anoenderana anowanikwa pana Hulu wenyaya pfupi yaakanyora izvo hazvisi izvo zvinotyisa asi zvakatipa vamwe vatambi vezvitendero zvinotyisa.midsommar.
Saka ipapo iwe unayo, iyo Hulu inoyerera yekupona gwara kune iyo coronavirus. Kusvikira chinhu ichi chapfuura, chiite zvakanakisa zvacho. Vamwe vanhu vanochengetera mapepa ekuchimbuzi, isu tinodhakwa nekutya. Uye ndiwo maitiro ako iwe "kushamwaridzana kure uye kutonhora" seanotyisa fan.
28 Days Gare gareVana veChigambaCOVID19. Hulukutamba jigsawOculusOdd ThomasOverlordTexas ChainsawProgidyTimothy Rawles
40 Mafirimu Anotyisa Anotyisa Kunakidzwa Kumba paAmazon Prime
'Nzvimbo Yakanyarara II' Inoyerera Pamhepo Ndapota